कोरोना संक्रमणबाट अहिले सम्मकै धेरै मृत्यु, संक्रमित कति थपिए ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
कोरोना संक्रमणबाट अहिले सम्मकै धेरै मृत्यु, संक्रमित कति थपिए ?
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८ हजार १७३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पीसीआर विधिबाट ८ हजार ६४ र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा १०९ गरी ८ हजार १७३ जना संक्रमित भेटिएका हुन् । आज कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अहिले सम्मकै धेरै २४६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार ९८९ जना कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएका छन।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध १२ दिनपछि बहस
सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले १२ दिनपछि बहस गराउने भएको छ।
अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले दुबै पक्षको बहस डाकेको हो।
उक्त रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। जेठ १७ गतेदेखि रिट निवेदक र विपक्षीको बहस अदालतमा गराउने आदेश न्यायाधीश खड्काको इजलासले गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सरकारले वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी थिइन्।
राज्यका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। ऐनमा परिषदका सदस्यमध्ये सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ। अध्यादेशले भने बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो। उक्त अध्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष ओलीले डाकेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका सदस्य बसेरमात्रै पदाधिकारी नियुक्तिका लगि सिफारिस गरेका थिए।